Ukusoka: izinkomba, izinhlobo nemiphumela
Ukusoka, ngamanye amazwi, ukusoka - kuyinto ukusebenza okuyinto eyenziwa ukususwa kwejwabu wenduku. Isikhathi esining impela ke wenziwa emazweni ashisayo, lapho kukhona ingozi ukuvuvukala ngenxa yokuzuza ngaphansi ijwabu kwamagciwane.
Asoka yizinkomba ahlukahlukene:
Medical - ukuze kuvinjelwe futhi kwelashwe izifo ebulalayo;
zenkolo - ngesikhathi ukuzinikezela kuNkulunkulu we amaJuda namaSulumane;
nomphakathi - ukuze ikambiso kwezocansi futhi ukuvimbela sexual okuyinto ezibhekwa okubi;
kazwelonke - uphawu besekhaya abantu bamaJuda.
Kodwa inani eyinhloko ukuthengiselana namanje kwenziwe ngezizathu zezokwelapha, ezinye zazo yilezi:
Phimosis - isifo lapho enhlokweni yemphambili ayikwazi adalule ngenxa ukuvaleka ijwabu.
Warts - lesi sifo elibizwa imvelaphi viral, lapho endaweni warts zangasese avele.
Paraphimosis - ukwephula ikhanda okwenzeka lapho ukuvaleka ijwabu.
Ukusoka ihlukaniswe izinhlobo eziningana:
ukusoka Ubuncane excised lapho kuphela ingxenye encane inyama. Okwenziwe ngesikhathi kumiswa isibanda ukhalise, noma hypertrophy kwelujwabu.
ukusoka kwengxenye - eyohlinzwa lapho ushiye evulekile kuphela ukuvulwa kwangaphandle urethra.
ukusoka Maphakathi - uhlobo ethandwa kakhulu wokusebenza, okwathi ngemva kwalokho enhlokweni yemphambili uhlale evulekile.
Ukusoka Tight - Excision yikho konke emphethweni wenduku ke lesikhumba sakhe iqine njalo.
Phela inqubo magciwane nesineke kunikezwa izinzwa, ekukhethweni zazo lincike izifiso isiguli futhi izinkomba wezokwelapha. Ngokulandelayo, ukusika ijwabu emhlabeni umthondo. Kulokhu, sisebenzisa izibopho ekhethekile iyizwe elihle kanti futhi ubukhulu umthondo. Ngemva kwalokho, isembozo ezivuzayo isiyingi. Lonke operation kuthatha isilinganiso imizuzu 30-40 of.
Eminyakeni yamuva nje iye zithandwa kakhulu yokusoka laser. Le ndlela kunezinzuzo phezu kwezinye izindlela kuhlinzwa. Ngokwesibonelo, ugongolo laser ukhiqiza ukususwa kwejwabu cishe kobuhlungu futhi fast kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ingozi yezinkinga lingaphansi kakhulu, futhi inkathi nokuvulwa amadoda ukuqhubeka ukuphila nobunzima mufushane.
Yehlisa inani pheshana urinary nezifo.
It kunciphisa ingozi yokuthola izifo ezithathelwana ngobulili.
It kunciphisa ingozi yomdlavuza penile.
It lula inqubo ekunakekeleni kwezitho zobulili.
Ngokusho eziningi, umthondo iba ukubukeka yobuhle ngaphezulu.
Ingozi kuhlinzwa indawo ukutheleleka.
Ukunciphisa ukuzwela ekhanda.
Wonke umuntu, ngubani yanquma ekusokeni, kumele ukwazi yezinkinga kungenzeka nemiphumela ezivame ukuvela ngemva lolo hlobo lokuhlinza.
Kwezakhi zabantu. ukuguqulwa kwezakhi zofuzo Chromosomal e abantu
Igazi ekunqandeni ngenxa yokuphatheka okuvikela umzimba
Ezivuvukele ukuthi uyenze?
Ukuphefumula Proper ngesikhathi sokubeletha
Sleeping amaphilisi ekhaya - zokupheka abanye abantu kanye namathiphu
Yiziphi streamer futhi confetti? Incazelo kanye nokusetshenziswa
Usimende esiswini isisindo ukulahleka: ukubuyekezwa, imiyalelo
Abalingisi movie "isikhonyane." Ubani izinkanyezi ku-movie "isikhonyane"?
Ukupheka Gingerbread indlu: iresiphi dessert fabulous
Rosehip isiraphu - ukwakheka kanye yokusetshenziswa
U-Luis Gustavo ungumdlali onokwethenjelwa
Art ukuxoxisana: imithetho eyisisekelo. Indlela ixoxisane nabantu?
Electric Slicer Bosch: incazelo kanye nokubuyekeza
Ivelaphi Diaskintest Petersburg? I izinkomba esiyinhloko
Ihhotela "Slovakia", Saratov: oxhumana nabo, izibuyekezo, izithombe